Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo Dhagax-dhigay Dhisme cusub + Sawirro – Hargeisa Water Agency
Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa oo Dhagax-dhigay Dhisme cusub + Sawirro
November 11, 2014By admin
Xafiisyo xarun u noqon doona dhuumaha biyo-ballaadhinta caasimadda oo la bilaabay tartanka qandaraaska dhismahooda
Hargeysa (HWA)- Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Hargeysa Md. Ibraahim Siyaad Yoonis, ayaa dhagax-dhigay dhisme cusub oo lagu kordhinayo xarunta wakaaladda.
Maareeye Ibraahim ayaa dhagax-dhigay maanta dhisme xafiisyo u noqonaya waaxda xisaabaadka ee Wakaaladda Biyaha, kaas oo uu maalgelinayo ururka Midowga Yurub oo bixinaya mashruuca ugu wayn ee lagu ballaadhinayo biyaha caasimadda.
Md. Ibraahim Siyaad oo hadal kooban ka sheegay madasha dhismaha laga bineeyey, waxa uu sheegay in xafiisyadan cusub oo gaar u noqonaya waaxda xisaabaadku ay wax wayn u soo kordhinayaan shaqada wakaaladda.
muuqaalka dhismuhu yeelanayo
Dhinaca kale, xafiisyo xarun u noqon doona dhuumaha (pipes) biyo-ballaadhinta ee ceelasha Geed Deeble, ayaa la bilaabay hawlaha tartanka qandaraaska dhismahooda.
Xafiisyadan oo laga dhisayo degaanka Xeedho ee Waqooyiga Hargeysa oo qorshuhu yahay in laga maamulo shaqada dhuumaha ama beebabka lagu beddelayo kuwa waqtigan biyaha uga soo qaada caasimadda ceelasha Geed-deeble oo qayb ka ah mashruuca biyo-ballaadhinta ee Midowga Yurub ugu deeqay Somaliland, ayaa la soo tusay wakiillo ka kala socday shirkadaha ku tartamaya dhismahooda shalay (10 November 2014).
Masuuliyiinta iyo injineerrada wakaaladda Biyaha iyo kuwa xafiiska mashruuca biyo-ballaadhinta qaabilsan (HUWSUP), ayaa wakiillo ka kala socday siddeed shirkadood oo waddani ah geeyey madasha laga dhisayo xafiisyadan si xog dheeraad ah uga helaan dhismayaashan iyo goobaha laga hirgelinayo.